Aabihii xushay ragga u qisaasay xubnihii ku xadgudbay gabadhiisa - Worldnews.com
Cabdifitaax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige ayaa aroornimadii Talaada lagu toogtay fagaare ku
"Qoys ahaan annaga ayaa soo magacaabanay qisaasayaasha. Dowladda waxay nagu tiri soo xusha, xitaa waad iska dhaafi kartaa ciidamadda,"
GAROWE, Puntland – Warbaahinta caalamka ayaa si weyn u baahisay xukunka dilka toogashada oo ay dowladda Puntland ku fulisay kiiska kufsiga iyo khaarijinta ee Caasha Ilyaas...
Puntland oo qisaastay laba kamida raggii lagu helay kiiska Caasha
BOOSAASO, Puntland – Dowladda Puntland ayaa maanta oo Talaado ah waxay dil toogasho ku fulisay laba kamid ah raggii lagu helay kiiska kufsiga iyo dilka ee Caasha Ilyaas...
Raggii kufsaday Caaisha Ilyaas oo lagu toogatay Bosaaso
Waxaa saaka maamul goboleedka Puntland lagu toogtay laba kamid ah raggii kufsaday Caaisha Ilyaas oo maxkamadaha Puntland ay dil xukumeen. Ragga la toogtay oo lagu kala...
WASHINGTON, US – Madaxweyne Donald Trump ayaa caddeeyay in uusan saamixi doonin xubnihii isku dabariday xilka xayuubintiisa. "Mararka qaarkood ma sahlana waxyaabo aad...
GAROWE, Puntland – Puntland, oo noqotay maamulkii ugu horeeyay ee Soomaaliya oo laga hirgeliyay hay'adda baarista danbiyada hidda-sidaha DNA iyo Raadadka faraha, ayaa kala saartey caruur laysku heystay. Sidda uu ka dhawaajiyey madaxa hay'addaas, in ka badan 50 kiis oo ku saabsan caruur ay su'aal ka taagneyd cidda dhashay ayay ku guuleysteen in lagu qanco natiijada...
Kiiska Caa\_'isha: Sida baaritaanka hidda-sidaha DNA loo adeegsaday
Labo qof oo maxkamad ay ku heshay kufsi iyo dil loo geystay Caa'isha Ilyaas ayaa maanta lagu dilay magaalada Boosaaso ee dowlad-goboleedka Puntland. Qof seddaxaad oo la xukumay ayaan la dilin. Seddaxdaas qof waxay ka mid ahaayeen dad badan oo loo xiray kiiskii kufsiga iyo dilka Caa'isha Ilyaas oo 12 sano jir ahayd. Arrintaas oo ka dhacday Gaalkacyo, dhammaadkii bishii February,...
Kiiska Caa’isha+Raggii kufsaday oo la dilay+ Sida baadhitaanka hidda-sidaha DNA-dooda loo adeegsaday Labo qof oo maxkamad ay ku heshay kufsi iyo dil loo geystay Caa’isha Ilyaas ayaa maanta lagu dilay magaalada Boosaaso ee dowlad-goboleedka Puntland. Qof seddaxaad oo la xukumay ayaan la dilin. Seddaxdaas qof waxay ka mid ahaayeen dad badan oo loo xiray kiiskii kufsiga iyo dilka...
Somaliland oo xukuno ku ridday askar lagu eedeeyay fal dil ah
HARGEYSA, Somaliland – Maxkamadda Ciidamadda Somaliland ayaa xukuno isugu jira dil iyo xarig waxay ku riday saddex askari oo booliis ah. Maxamed Yaasiin Faarax oo lagu eedeeyay dilka marxuum Caydaruus Maxamed Daahir ayaa lagu xukumay dil toogasho. Xeer-beegtada ayaa tilmaamtay in xukunkaas uu yahay qisaasta...
Ururka Midowga Afrika oo yeeshay gudoomiye cusub
ADDIS ABABA, Ethiopia – Madaxweynaha wadanka Koonfur Afrika ayaa waxaa loo doortay gudoomiyaha cusub ee ururka Midowga Afrika. Cyril Ramaphosa ayaa maanta oo Isniin ah wuxuu xilka kala wareegay Cabdifitaax Al Siisi, hogaamiyaha wadanka Carbeed ee Masar. Xil-wareejinta ayaa ka dhacday shir-madaxeedka 33aad ee AU-da oo lagu qabtay magaalo madaxda Itoobiya ee Addis Ababa....
GAROWE, Puntland – Dowladda Puntland ayaa Khamiista maanta ah waxay digniin cod dheer ah kasoo saartey adeegsiga barnaamijka sarifka lacagaha online-ka ah ee Forex. Mashruucaan oo ah in dadku maalgeshi ku sameystaan shirkado isla markaana loo sheegayo in ay heli doonan macaash badan ayaa aad ugu baahay Soomaaliya. Agaasimaha Bangiga dhexe ee Puntland ayaa muwaadiniinta ku...